ဧရာညီနောင်: BusinessCards MX v4.02
BusinessCards လှလှလေးတွေဖန်တီးချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုပါ။
လွယ်လွယ်ကူကူလျင်လျင်မြန်မြန် နဲ့ professional business cards အဖြစ်နဲ့ Print ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် templates များကိုလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး သူ့အထဲမှာတော့ မူရင်း templates
400 ကျော်ပါ ပါတယ်။ Present အနေနဲ့ကတော့ MAZE Keygen လေးထည့်ပေးထားတယ်နော်။
OS အနေနဲ့ကတော့ Windows 2000/XP/Vista/7 အားလုံး သုံးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံနဲ့ သုံးစွဲနည်းလေးကတော့ထုံးစမ်းအတိုင်း(ပျင်းလို့) ကျွန်တော်မရေးတော့ပါဘူး....း) ။ Software Run တာကလည်းထူးခြားခြား ဘာမှမပါ ပါဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည့်ပါတယ်။အသုံးပြုနည်းလေးကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ အဆင်မပြေတာဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တာဖြစ်ဖြစ် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Gmail အပ်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
export graphic files to PDF, JPG, TIFF, BMP, high-resolution (300 DPI, 600 DPI)
Size of business cards: min - 70? 40, max - 105? 65
Posted by ဧရာညီနောင် at 6:07 AM